Soo dejisan Emsisoft Anti-Malware 2020.7.2.10280 – Vessoft
WindowsAmnigaAntiviruses,Sawireyaasha fayraskaEmsisoft Anti-Malware
Qaybaha: Antiviruses, Sawireyaasha fayraska
Bogga rasmiga ah: Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware – fayras oo taageera tiknoolojiyadda casriga ah si looga hortago fayraska noocyada kala duwan. Nidaamku wuxuu ka hortagaa biilasha bangiyada, ransomware, qalabwareer, dhabarka dambe, iwm. Emsisoft Anti-Malware waxay tarjun kartaa habdhaqanka codsiyada firfircoon, taas oo u ogolaanaysa in la ogaado saxeexyada cusub ee aan weli la aqoon. Software-ka ayaa ka horjoogsanaya fayrusyada wakhtigooda, waxay gartaa waxqabadyada laga shakiyo iyo waxay ka hortagaan isbeddelada aan sharciga aheyn ee xeerarka dab-damiska ee Windows. Emsisoft Anti-Malware waxay kuu ogolaaneysaa inaad qeexdo qalabka adeegsiga shabakada iyo adware ama faafaahin kale oo aan la rabin oo lagu rakibay barnaamijyada kale.
Xakamaynta iyo xariirka xariifnimada ah
Nidaamka ogaanshaha habdhaqanka habboon
Soo dejisan Emsisoft Anti-Malware
Faallo ku saabsan Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware Xirfadaha la xiriira